लकडाउन घटाउन हरेक वडालाई कोरोना फ्रि र ग्रीन जोन बनाउँदै लगौं
अहिले विश्व कोरोन महामारीको चपेटामा छ । विश्वका ठूला तथा सुद्रिढ स्वास्थ्य व्यवस्था भएका देशहरू पनि महामारीका कारण अस्तब्यस्त बनेका छन् । विश्वका करिब आधा जनसंख्या अहिले आफ्नो घरमै लक्डडाउन भएका छन् । ३१ डिसेम्बर मा चिनियाँ अधिकारीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई यो भाइरसको बारेमा पहिलो पल्ट जानकारी दिएको थियो । सुरुमा यसलाई ‘२०१९–एनसीओभी’ भनियो पछि यसलाई कोभिड–१९ भनियो ।
जनवरी ९ मा यो भाइरसका कारण पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भयो । वुहान सहरको एक अस्पतालमा ६१ बर्षीय चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भयो । २० जनवरीसम्म आइपुग्दा यो भाइरस थाइल्याण्ड, जापान र दक्षिण कोरियासम्म फैलियो । त्यसयता युरोपियन देशहरू, संयुक्त राज्य अमेरिकाका साथै विश्वका २०० देशहरूमा यो भाइरसको कारण आज सम्म ८ लाख ५९ हजार ३ सय ९५ जना संक्रमित भएका छन् भने ४२ हजार ३ सय २८ जना व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको छ ।
कोरोना महामारीको उद्गम चीनको वुहानमा अहिले अन्य देशको तुलनामा नया संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको संख्या निकै कम छ । सुरुआतमा चीनपछि एकदम आक्रामक रूपमा संक्रमण फैलिएको दक्षिण कोरियामा नयाँ संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको संख्या निकै कम रहेको छ र यो घट्दो क्रममा छ । कोरोना भाइरस संक्रमण तथा मृत्युदरको आँकडा हेर्ने हो भने विश्वका केही देश छन्, जसले एक हदसम्म यो भाइरसलाई काबुमा राख्न सफल भएका छन् । ति देशहरू हुन्, दक्षिण कोरिया, रसिया तथा स्वयम् चीन ।
२० जनवरीमा पहिलो संक्रमण फेला परेको दक्षिण कोरियामा सुरुमा यो भाइरस निकै तिब्र गतिमा फैलियो । सुरुआती संक्रमणको दर हेर्ने हो भने चीनपछि अर्को केन्द्रबिन्दु बन्ने करिब निश्चितप्रायः थियो । तर सबैको अनुमानविपरीत कोरियाली सरकारले यसको संक्रमणलाई नाटकीय रूपमा कम गर्न सफल भयो ।
विभिन्न अनुसन्धानकर्ताका अनुसार दक्षिण कोरियाले सुरुदेखि नै महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै एएभ, मास्क, पञ्जा, भाइरस टेस्ट गर्ने मेसिन साथै अन्य मेडिकल सामग्रीको अभाव हुन दिएन । अत्यधिक मात्रामा भाइरस परीक्षण गर्ने काम गर्‍यो । क्वारेन्टाइनमा बसेको ब्यक्तिहरूको गतिविधि मोबाइल एपमार्फत निगरानी गर्‍यो । संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, दायाँ हातको सट्टा बायाँ हातको प्रयोग गर्ने, ट्राभल हिस्ट्री भएका संक्रमण सम्भावित सम्भावित व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सफल भएकै कारण कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटाबाट धेरै हदसम्म बच्न सफल भएको छ । दक्षिण कोरियाको मूलमन्त्र टेस्ट, ट्रेस र ट्रिट अर्थात् परीक्षण, पत्ता लगाउने काम र उपचार हो ।
चीनसंग ४२०० किमी सीमा नाका रहेको रुसले पनि कोरोन संक्रमणको संख्यालाई निकै थोरैमा सीमित राख्न सफल भएको छ । चीनसँग सिधा नाका भएको र एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भएको कारण रुसमा संक्रमण धेरै हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो । तर रसियाले महामारीको सम्भावित खतरालाई सुरुमै आँकलन गर्‍यो । रुसले चीनसँगको आफ्नो भू तथा जल नाक बन्द गर्‍यो । केही दिनपछि समान आयात–निर्यात पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्‍यो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३० जनवरीमा महामारी घोषणा गरेको एक दिनपछि रुसमा पहिलो दुई वटा संक्रमणको पुस्टि भयो । त्यसको ६ दिनपछि वुहानबाट उद्दार भएर एक आफ्ना १ सय ४४ जना नागरिकलाई रुस सरकारले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्यो । संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै रुस सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्यो। उसले धेरैभन्दा धेरै परिक्षण गर्‍यो । संक्रमित व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम र शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई सरकारी निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गर्‍यो । यी कार्यले गर्दा रुसले अरु देशको तुलनामा संक्रमित तथा मृत्युदर न्युन राख्न सफल भयो ।
नेपालमा पनि सुरुआतमै चीनको वुहानबाट अध्ययनको शिलशिलामा फर्किएका एकजना विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखियो । उपचारपछि ति व्यक्ति निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने थप ४ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् । देश अहिले लकडाउनमा रहेको छ । विश्वका थुप्रै सम्पन्न राष्ट्र कोरोनको कहरबाट आक्रान्त भएको बेला हाम्रो जस्तो विकासशील देश अछुतो रहन सक्दैन । तर हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश सधैँभरि लकडाउनमा बसिराख्न सम्भव छैन ।
के सधैँ लकडाउन मात्र गरेर सम्भव छ ?
अन्य ठूला देश जस्तो अत्याधुनिक प्रविधि, जनशक्ति तथा अर्थतन्त्र नभएको हाम्रो जस्तो देशले कसरी यो महामारीलाई जित्न सक्ला त ? प्रश्न गम्भीर छ र चुनौती त्यस्तै ठूलो । यस्तोमा हाम्रो देशमा नेतृत्त्व सम्हालेका व्यक्तिहरूले केही सामान्य कार्य गर्न जरुरी छ ।
लकडाउन भनेको रक्षात्मक कदम हो, यसले कोरोना फैलिन नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ तर के लकडाउन मात्र अन्तिम उपाय हो त ? पक्कै होइन, जोखिम न्यूनीकरण गर्न लिइने कदम हो, रक्षात्मक कदम अर्थात् अहिलेको लकडाउन ।
अबको चरणमा हरेक वार्डलाई कोरोना फ्री जोन वा ग्रीन जोन बनाउँदै जानु पर्छ, यो आक्रामक कदम हुने छ ।
अबको चरणमा हरेक वार्डलाई कोरोना फ्री जोन वा ग्रीन जोन बनाउँदै जानु पर्छ, यो आक्रामक कदम हुने छ । जस्तो हरेक वार्ड मा वार्ड अध्यक्षको नेतृत्त्वमा आफ्नो वार्डमा कोरोना संक्रमणसँग मिल्दो जुल्दो (ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, आदि ) लक्षण हुने व्यक्तिहरूको पहिचान हुनुपर्छ, यदि यी लक्षण हुने व्यक्तिहरूको ट्राभेल हिस्टोरी छ भने तु अस्पताल रेफर गरिनु पर्छ । छैन भने कडा क्वारेन्टाइनमा राखिनु पर्छ, त्यो पनि वार्ड समितिको निरन्तर निगरानीमा ।